Iindaba -Izinga eliphantsi leVOC yeZithuthi eziNcitshisiweyo zelangatye- Yihoo FR950
I-VOC yeZithuthi eziCocekileyo yoThotho lweLangatye edibeneyo- Yihoo FR950
Izongezo ezibonelelwa yinkampani, ezisebenza kwitrayi yeemoto ngakumbi kwizitulo zemoto, zamkelwe ukuba zisebenze ngokuchasene nokutyheli kunye nokuchasana ne-UV, kunye nokuhlisa ukukhutshwa kweVOC. Ezi zongezelelo ziye zahlengahlengiswa ngamashishini amaninzi awaziwayo eemoto nakumazwe aphesheya.
Yihoo FR950 luhlobo phosphate ester nelangatye nekudodobalisa, ingakumbi ilangatye nekudodobalisa DB amagwebu.
Silugqibile uvavanyo kunye ne-foam kunye nangaphandle kwe-FR950 (eyenziwe yi-SGS):
Ukukhutshwa kwecarbon iyonke (ukukhutshwa kweVOC iyonke)
Indlela yovavanyo: Jonga kumgangatho we-PV3341. I-Headspace gesi i-chromatograph hydrogen flame ionization detector yayisetyenziselwa uhlalutyo.
UHLOLO LWEZINTO ZOKUHLOLA MDL 001 002
AMANQAKU E-VOC ug C / g 10 14 64
Qaphela: 001 = ngaphandle kweFR950; 002 = nge-FR950
Isiphelo: Emva kokudibanisa i-FR950, ukukhutshwa kwe-VOC kwemveliso kulawulwa ngokucacileyo.
I-Yihoo FR950 iye yahlengahlengiswa ngabenzi abaninzi abaqhelekileyo beemoto.
Ixesha Post: Sep-13-2021